စုချစ်သူ: ဦးသုအတွက် အလွမ်းစာ
Posted by စုချစ် at 5/23/2010 12:13:00 PM
ကိုယ်လဲ သူ့ကို မင်းသားအဖြစ်မှာရော အဆိုတော်အဖြစ်မှာတင်သာမက စာရေးဆရာ တယောက်အနေနဲ့ပါ တကယ်နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်...။
ဦးသုမောင် ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေသော် လို့
ညီမနဲ့ အတူတူ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်...။
ညီမ စုချစ်လေး...အမလည်း သူတို့ သားအဖတွေကို သိတ်ချစ်တယ်၊ သူတို့ရဲ့စာ၊ သူတို့ရဲ့ အနုပညာကြောင့် သူတို့ကို ချစ်တာ...
သူ့စာတွေက ရိုးစင်းပြီး လူ့သဘာဝကို ဖော်ပြနိူင်လို့ သိတ်ကြိုက်တယ်...သူ့စာအဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ရင်း ဦးသုကို လွမ်းနေတော့မှာပါပဲ.....
Everytime I read your blog.But I never write comments. just now I read your post, I would like to write something.Because of( Thu Maung )is the only one my favorite author,actor also singer.I feel so sorry for him.
Thank you so much for your post friend.
Everytime I read your blog.But I never write comments.Now I just read your post,I would like to write something because of (Thu Maung) is the only one my favorate author,actor also singer.I feel so sad for him.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အစ်မသက်ဝေ၊ အစ်မချစ်ကြည်အေး၊ သူငယ်ချင်းသီသီ...
သူ နေတဲ့အိမ်ကို နောင်ရိုးစာအုပ်တိုက်ပိုင်ရှင်အမကြီးနဲ့ 
အရမ်းလေးစားခဲ့ ရတဲ့အနုပညာရှင်ကြီးပါဗျာ-
လွမ်းလိုက်တာ စုချစ် ရယ်- - - -
စုချစ်လဲ ကြိုးစားနေဆဲပါ...ဂျစ်ရေ... ကျေးဇူး...